अनुरूप उमेर सबैभन्दा सामाजिक अनुसन्धान उपयुक्त नैतिक ब्यालेन्स मारे। उदाहरणका लागि, सामूहिक 1,00,000 भन्दा बढी मान्छे संलग्न कि प्रयोगशाला प्रयोगहरु को समीक्षा मा, Plott (2013) मात्र एक प्रतिकूल घटना, किनभने एक आर्थिक खेल पैसा गुमाउने को दुखी भइन् एक विद्यार्थी फेला परेन। अघिल्लो तीन डिजिटल उमेर उदाहरण चित्रण रूपमा तथापि, अनुसन्धानकर्ताहरूले अब विगतमा ती फरक छन् भनेर नैतिक चुनौती सामना। यी तीन अध्ययन बाट Generalizing, म राम्ररी अर्थ अनुसन्धानकर्ताहरूले सामना गर्ने मुख्य समस्या क्षमताहरु नियम, कानून, र मान्यता पनि भन्दा छिटो परिवर्तन गर्दै छ भन्ने सोच्छन्। थप विशेष शोधकर्ताहरु-अक्सर कम्पनीहरु र साथ सहयोग मा विगतमा भन्दा सहभागीहरू भन्दा बढी उर्जा सरकारको-छ। शक्ति, म बस मतलब आफ्नो सहमति वा जागरूकता बिना मानिसहरूलाई कामहरू गर्ने क्षमता। म कुरा गर्दै छु कुराहरू आफ्नो व्यवहार देख्दा वा प्रयोगहरू तिनीहरूलाई भर्ना हुन सक्छ या त। पालन ​​र व्यग्र गर्न अनुसन्धानकर्ताहरूले शक्ति बढ्दै छ रूपमा, त्यहाँ शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ बारे स्पष्टता मा एक बराबर वृद्धि छ। वास्तवमा, अनुसन्धानकर्ताहरूले कसरी असंगत र मिल्दाजुल्दा नियम, कानून, र मान्यता पनि आधारित आफ्नो शक्ति अभ्यास गर्ने निर्णय गर्नै पर्छ। स्पष्ट हुन, यो भन्दा डिजिटल उमेर अनुसन्धान unethical छ भन्ने होइन। वास्तवमा, यो अवस्था दिइएको, म अनुसन्धानकर्ताहरूले उल्लेखनीय राम्रो न्याय देखाएका छन् लाग्छ। शक्तिशाली क्षमताहरु र अस्पष्ट निर्देशन संयोजन तथापि, कठिन परिस्थितिसित राम्ररी अर्थ अनुसन्धानकर्ताहरूले राख्छ।
तपाईंले व्यक्तिगत तवरमा विशेष गरी मानिसहरूलाई कामहरू गर्ने क्षमता को मामला मा शक्तिशाली लाग्न सक्छ तापनि छैन, झन् अनुसन्धानकर्ताहरूले-अक्सर कम्पनीहरु र साथ सहयोग मा सरकारको-छ पालन र आफ्नो सहमति वा जागरूकता बिना व्यग्र गर्ने क्षमता। उदाहरणका लागि, वरिपरि एक व्यक्ति निम्न र तिनीहरूले के सबै कुरा रेकर्ड कल्पना गर्नुहोस्। यो ट्रयाक तिनीहरूले कुरा गर्ने उनीहरूले के किन्न, जस्तै तिनीहरूले कहाँ जाने कुरा समावेश थियो, र तिनीहरूले के पढ्नुहोस्। भारी बजेट संग सरकारको सामान हुन प्रयोग अनुरूप उमेर जस्ता मान्छे निगरानी। अब, यो सबै जानकारी नियमित र स्वतः लाखौं बारेमा रेकर्ड गरिएको छ र चाँडै मान्छे अरबौं हुन। यसबाहेक, यस जानकारी को सबै डिजिटल भण्डारण गरिएको छ, किनभने यो सजिलो खोज प्रतिलिपि गर्न, प्रसारित, मर्ज, र स्टोर छ। अर्को शब्दमा, तर्साउन र KGB, सीआईए र Stasi जस्तै विस्मित शीत युद्ध जासूस एजेन्सीहरू हुने नियमित गरेको छ आज। यसबाहेक, यस व्यवहार ट्रयाकिङ धेरै surveilled भइरहेका छन् गर्नेहरूलाई पूर्ण समझ बिना भइरहेको छ।
आंशिक ठूलो निगरानी को यो अवस्था कब्जा कि एक ज्वलन्त उपमा को panopticon छ। जेलमा लागि एक वास्तुकला रूपमा जेरेमी Bentham द्वारा लेट 18 औं शताब्दीमा पहिलो प्रस्तावित, को panopticon निगरानी शारीरिक देखाउनुभएको छ (चित्रा 6.3)। यो panopticon एक केन्द्रीय प्रहरीधरहरा वरिपरि उन्मुख कोठा संग एक परिपत्र भवन छ। जसले यो प्रहरीधरहरा ओगटेको कोठा मा सबै मान्छे को व्यवहार निरीक्षण गर्न सक्छन्। र, critically, को कोठा मा मान्छे प्रहरीधरहरा मा व्यक्ति पालन गर्न सक्दैन। प्रहरीधरहरा मा व्यक्ति यसरी एउटा नदेखिने seer छ (Foucault 1995) ।
चित्रा 6.3: को panopticon जेल, पहिलो जेरेमी Bentham द्वारा प्रस्तावित देखि डिजाइन। केन्द्र मा, त्यहाँ सबैको व्यवहार निरीक्षण गर्न सक्छन् र अवलोकन गर्न सकिन्छ जसले एउटा नदेखिने seer छ। विले Reveley द्वारा चित्रकला, 1791. स्रोत: विकिमिडियामा ।
किनभने यो व्यवहार पूर्ण डिजिटल रेकर्ड सधैंभरि भण्डारण गर्न सकिन्छ भनेर उत्पादन गर्न सक्छन् वास्तवमा, डिजिटल निगरानी एक प्रहरीधरहरा एक व्यक्ति भन्दा पनि अधिक चरम छ (Mayer-Schönberger 2009) । त्यहाँ सबै मानव व्यवहार को पूर्ण रेकर्डिङ एक मास्टर डेटाबेस मर्ज अझै छैन, कुरा भनेर निर्देशन मा बढ छन्। र, त्यो आन्दोलन सम्भवत रूपमा लामो सेन्सर को क्षमताहरु वृद्धि गर्न जारी रूपमा जारी हुनेछ, भण्डारण लागत कम गर्न जारी, र हाम्रो जीवन बढी कम्प्युटर-मध्यस्थता हुन्छन्।
धेरै सामाजिक अनुसन्धानकर्ताहरूले यो मास्टर डेटाबेस सुरुमा रोमाञ्चक ध्वनि सक्छ, र यो पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान को धेरै को लागि प्रयोग गर्न सकिएन। नष्ट को डेटाबेस: कानूनी विद्वानहरूको तथापि, यो मास्टर डेटाबेस एक फरक नाम दिइएको छ (Ohm 2010) । मान्छे केही सामाग्री पढ्न वा केही विषय छलफल गर्न अनिच्छुक बन्न समेत अपूर्ण मास्टर डेटाबेस को सृष्टि सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा Chilling असर गर्न सक्छ (Schauer 1978; Penney 2016) । कि मास्टर डेटाबेस, जबकि एक लागि सिर्जना उद्देश्य-भन्न लक्षित विज्ञापन-सक्छ एक दिन एक फरक उद्देश्य को लागि, प्रयोग माध्यमिक प्रयोग भनिने अवस्था एक जोखिम पनि छ। Unanticipated माध्यमिक प्रयोग एक भयंकर उदाहरण दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा भयो सरकार जनगणना डाटा-को कि को मास्टर डेटाबेस समय-थियो यहूदीहरू, रोम, र अरूलाई (तालिका 6.1) विरुद्ध भइरहेको थियो भन्ने नरसंहार सुविधा प्रयोग गर्दा (Seltzer and Anderson 2008) शान्तिपूर्ण समयमा डाटा संकलन गर्ने statisticians लगभग पक्कै पनि असल मनसाय थियो। तर, विश्व परिवर्तन-जब जब नाजीहरूले जर्मनी र छिमेकी पावर आए देशहरूमा-यो डाटा सक्षम एक माध्यमिक प्रयोग इरादा कहिल्यै थियो। एक पटक एक मास्टर डेटाबेस अवस्थित, यो पहुँच बढाउनका सक्छ जसले मुश्किल छ र यो कसरी प्रयोग गरिनेछ।
तालिका 6.1: कहाँ जनसंख्या डाटा प्रणाली संलग्न वा संभावित छन् मानव अधिकार दुर्व्यवहार संलग्न मामला। यो तालिका मूल संकलित थियो Seltzer and Anderson (2008) , र म यसको स्तम्भहरू उपसमूह समावेश छन्। हेर्नुहोस् Seltzer and Anderson (2008) प्रत्येक मामला र समावेशीकरणको मापदण्ड बारेमा थप जानकारीको लागि। केही, तर सबै छैन, यी अवस्थामा को unanticipated माध्यमिक प्रयोग संलग्न।
लक्षित व्यक्तिहरूलाई वा समूह
मानव अधिकार उल्लंघन वा presumed राज्य इरादा
अष्ट्रेलिया 19 औं र प्रारम्भिक 20 औं शताब्दीको Aborigines जनसंख्या दर्ता बाध्य माइग्रेसन, नरसंहार को तत्व
चीन 1966-76 सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा खराब-वर्ग मूल जनसंख्या दर्ता बाध्य माइग्रेसन, instigated भीड हिंसा
फ्रान्स 1940-44 यहूदीहरूले जनसंख्या दर्ता, विशेष censuses बाध्य माइग्रेसन, नरसंहार
जर्मनी 1933-45 यहूदीहरूले, रोम, र अरूलाई धेरै बाध्य माइग्रेसन, नरसंहार
हंगेरी 1945-46 जर्मन नागरिकहरु र ती रिपोर्ट जर्मन मातृभाषामा 1941 जनसंख्या जनगणना बाध्य माइग्रेसन
नेदरल्यान्ड्स 1940-44 यहूदी र रोम जनसंख्या दर्ता प्रणाली बाध्य माइग्रेसन, नरसंहार
नर्वे 1845-1930 Samis र Kvens जनसंख्या censuses जातीय सफाइ
नर्वे 1942-44 यहूदीहरूले विशेष जनगणना र प्रस्तावित जनसंख्या रजिस्टर नरसंहार
पोल्याण्ड 1939-43 यहूदीहरूले मुख्यतया विशेष censuses नरसंहार
रोमानिया 1941-43 यहूदी र रोम 1941 जनसंख्या जनगणना बाध्य माइग्रेसन, नरसंहार
रवान्डा 1994 Tutsi जनसंख्या दर्ता नरसंहार
दक्षिण अफ्रिका 1950-93 अफ्रिकी र "रंग" popualtions 1951 जनसंख्या जनगणना र जनसंख्या दर्ता रंगभेद, मतदाता disenfranchisement
संयुक्त राज्य अमेरिका 19 औं शताब्दीमा अमेरिका को मूल निवासी विशेष censuses, जनसंख्या रजस्टर बाध्य माइग्रेसन
संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 शङ्कास्पद मस्यौदा व्यवस्था violators 1910 को जनगणना छानबिन र ती परहेज दर्ता को अभियोजन
संयुक्त राज्य अमेरिका 1941-45 जापानी अमेरिकी 1940 को जनगणना बाध्य माइग्रेसन र दफन
संयुक्त राज्य अमेरिका 2001-08 शङ्कास्पद आतंककारीहरूले NCES सर्वेक्षण र प्रशासनिक डाटा छानबिन र घरेलू र अन्तर्राष्ट्रीय आतंककारीहरूले को अभियोजन
संयुक्त राज्य अमेरिका 2003 अरब-अमेरिकी 2000 को जनगणना अज्ञात
सोभियत संघ 1919-39 अल्पसंख्यक आबादी विभिन्न जनसंख्या censuses बाध्य माइग्रेसन, अन्य गम्भीर अपराध को सजाय
साधारण सामाजिक अनुसन्धानकर्ताहरूले समाज मा Chilling प्रभाव सिर्जना वा दोस्रो-प्रयोगको माध्यमबाट मानव अधिकार दुर्व्यवहार भाग जस्तै केहि देखि, धेरै धेरै टाढा। म तिनीहरू सामाजिक अनुसन्धानकर्ताहरूले केही मानिसहरू आफ्नो काम देख्ने जो मार्फत लेन्स बुझ्न मदत गर्नेछ लाग्छ किनभने म, तथापि, यी विषयहरू छलफल गर्नुभएको छ। उदाहरण को लागि, स्वाद, सम्बन्ध, र समय परियोजना फर्कन गरौं। हार्वर्ड देखि पूर्ण र दानेदार डाटा संग फेसबुक बाट सँगै पूर्ण र दानेदार डाटा मर्ज गरेर, शोधकर्ताओं विद्यार्थीहरुको सामाजिक र सांस्कृतिक जीवन को एउटा आश्चर्यजनक धनी दृश्य सिर्जना (Lewis et al. 2008) । धेरै सामाजिक अनुसन्धानकर्ताहरूले यो मास्टर डेटाबेस, राम्रो लागि प्रयोग गर्न सकिएन जो जस्तै देखिन्छ। तर, केही अरूलाई, यो सहभागीहरू को सहमति बिना सिर्जना गरिएको नष्ट को डेटाबेस को शुरुवात जस्तो देखिन्छ। स्वाद, सम्बन्ध, र समय परियोजना 2006 मा शुरू भयो, र अनुसन्धानकर्ताहरूले थियो कि जानकारी विशेष निजी थिएन। तर, तपाईं अगाडि एक बिट हेर्न यदि तपाईं यी मुद्दाहरू थप जटिल प्राप्त गर्न सम्भावना छ कि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले डिजिटल मोशाको कस्तो 2026 वा 2046 मा विद्यार्थी बारेमा निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ?
यो ठूलो निगरानी साथै, अनुसन्धानकर्ताहरूले-फेरि कम्पनीहरु र साथ सहयोग मा सरकारको-सक्छन् झन् प्रणालीबद्ध मानिसहरूको जीवनमा यादृच्छिक नियन्त्रण प्रयोगहरू सिर्जना गर्न हस्तक्षेप। उदाहरणका लागि, भावनात्मक Contagion मा, शोधकर्ताओं 7,00,000 मानिसहरूले प्रयोग आफ्नो सहमति वा जागरूकता बिना भर्ना। र, म अध्याय5(दौड प्रयोगहरू) मा वर्णन रूपमा, प्रयोग मा सहभागी गोप्य conscription यस प्रकारको असामान्य छैन छ। यसबाहेक, यो ठूलो कम्पनीहरु को सहयोग आवश्यक छैन। म अध्याय5मा वर्णन रूपमा, अनुसन्धानकर्ताहरूले झन् डिजाइन र शून्य चर लागत, एक लागत संरचना अत्यन्तै ठूलो प्रयोगहरू सक्षम बनाउँछ संग डिजिटल प्रयोगहरू निर्माण गर्न सक्छन्। प्रणालीबद्ध व्यग्र संभावना बढ्न जारी हुनेछ क्षमता पालन गर्ने क्षमता, जस्तै।
यो वृद्धि शक्ति को अनुहार मा शोधकर्ताहरु असंगत र मिल्दाजुल्दा नियम, कानून, र मान्यता पनि सामना। यो inconsistency को एक स्रोत डिजिटल उमेर को क्षमताहरु नियम, कानून, र मान्यता पनि बढी चाँडै परिवर्तन गर्दै छ। उदाहरणका लागि, साधारण नियम (संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा सरकार आर्थिक सहायता अनुसन्धान परिचालक नियमहरु को सेट) 2011 मा सुरु भयो साधारण नियम आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास 1981. देखि सानो परिवर्तन भएको छ तर 2016. दोस्रो को गर्मी को रूपमा पूर्ण थियो inconsistency को स्रोत गोपनीयता जस्तै अमूर्त अवधारणाहरु वरिपरि मान्यता अझै पनि सक्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले, नीति निर्माता, र कार्यकर्ता द्वारा बहस भइरहेका छ। यदि यी क्षेत्रमा विशेषज्ञहरु वर्दी सहमति पुग्न सक्दैन, हामी आशा हुँदैन भनेर empirical अनुसन्धानकर्ताहरूले वा सहभागीहरू या त सहमति पुग्नेछ। inconsistency को अन्तिम स्रोत डिजिटल उमेर अनुसन्धान जो संभावित मिल्दाजुल्दा मान्यता र नियमहरू जान्छ, अन्य सन्दर्भहरूमा मा झन् मिश्रित छ भन्ने छ। उदाहरणका लागि, भावनात्मक Contagion फेसबुक मा एक डाटा वैज्ञानिक र कर्नेल मा एक प्रोफेसर र स्नातक विद्यार्थी बीचको सहकार्य थियो। फेसबुक मा ठूलो प्रयोगहरू चलिरहेको तिनीहरूले सेवाको फेसबुक नियम को पालन रूपमा लामो रूपमा नियमित छ, र त्यो समयमा, त्यहाँ प्रयोगहरू कुनै तेस्रो-पक्ष समीक्षा भएको थियो। कर्नेल मा मान्यता र नियम एकदम फरक छन्; लगभग सबै प्रयोगहरू गर्ने कर्नेल आईआरबी समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसैले, नियम कुन सेट भावनात्मक Contagion-फेसबुक वा कर्नेल गरेको शासन गर्नुपर्छ? त्यहाँ असंगत र मिल्दाजुल्दा नियम, कानून, र पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले राम्ररी अर्थ मान्यता समस्या सही कुरा गरिरहेको हुन सक्छ हुँदा। वास्तवमा, किनभने inconsistency को, त्यहाँ पनि एकल सही कुरा हुन सक्छ।
समग्रमा, यी दुई सुविधाहरू-वृद्धि शक्ति र शक्ति कसरी गर्नुपर्छ प्रयोग-मतलब डिजिटल युगमा काम शोधकर्ताओं foreseeable भविष्यको लागि नैतिक चुनौतीहरूको सामना गर्न जाँदैछन् भन्ने बारेमा सम्झौताको अभाव। खुसीको कुरा, यी चुनौतीहरूको सामना अनुसन्धानकर्ताहरूले स्क्राच सुरु गर्न आवश्यक छैन। बरु, अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिले विकास नैतिक सिद्धान्तहरू र रूपरेखा, अर्को दुई खण्डहरू को विषय देखि बुद्धि आकर्षित गर्न सक्छन्।